Kuru Nhau & Ongororo Android 5.0 inoita kuti ubvise uye ubvise tochi yako, Wi-Fi neBluetooth kuburikidza nemirairo yeGoogle Zvino
Kusvika zvino, vashandisi veApple vaida kushandisa foni yavo sechiedza vaifanira kushandisa iyo yakapihwa nemugadziri, kana kurodha pasi app kubva kuGoogle Play Store. Kune iwo mafoni eApple ane Android 5.0 akaiswa, rairo raGoogle Zvino rava kugona kubatidza foni yako & apos; s matochi anongoti 'Batidza tochi'Unogona zvakare kuti'Dzima tochikudzima mwenje. NaLollipop, Google Zvino zvakare ichashanda pamwe nemimwe mirairo yakadai se 'Batidza(uye kure)Wi-Fiuye 'Batidza(uye kure)Makaralı. '
Kunze kwekugamuchira odhiyo odhiyo yemirairo yega yega, kadhi reGoogle Zvino rinozoonekwa riine switch yekuchinja mukati maro kuti ugone kukurumidza kushandura zvawakangokumbira iwe. Mimwe mirairo yakadai seiya yekuvhura / kudzima Ndege Mode, Kupenya kana Vhoriyamu hakushande. Panzvimbo pechikumbiro chako kuGoogle Zvino kuunza shanduko yaunoda, mushandisi anotumirwa kumatanho tebhu kuti uchinje manyorerwo ega ega.
Hechino chimwe chikonzero nei avo vane KitKat vari kushushikana vachitarisira kuti foni yavo Lollipopped. Paunenge uchinge uine Android 5.0 pafoni yako, ungangoda kubvisa iyo inozivikanwa 'Yakajeka Tochi Yemahara'app iyo yakawanikwa ku taura nzvimbo yako chaiyo uye yakasarudzika mudziyo wekuzivisa kune mapato echitatu anosanganisira ad network .
Android 5.0 inobvumira vashandisi kukumbira Google Zvino kuti vabatidze tochi
mabviro: AndroidPolice kuburikidza AndroidCentral
iphone 11 pro max zuva rekuburitsa
Samsung Galaxy S9 / S9 + gadziriso yekugadzirisa: Zvese zvakakosha zvigadziriso zvaunofanira kuchinja
iPhone 7 Jet Nhema vs Dema: chii & apos; s mutsauko
T-Mobile uye Sprint zviri pamutemo chimwe chiratidzo: heino & apos; s zvese zvaunoda kuti uzive